Otu esi etinye Utility Duf Disk na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye Utility Duf Disk na Debian 11 Bullseye
Tọzdee, Ọktoba 7, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Duf na .deb
Wụnye Duf na ngwugwu Snap
Otu esi ebido & Jiri Duf
Mba, ọ bụghị biya Duff ma ọ bụrụ na nke ahụ na-ada mgbịrịgba. Taa, anyị na-ekwu maka ya Uru diski Duf, isi iyi mepere emepe, efu "Utility efu iji diski" edere na Goland wee wepụta ya n'okpuru ikike MIT. Ngwa diski na-akwado ọtụtụ nyiwe dị ka BSD, Linux, macOS na sistemụ arụmọrụ Windows.
Duf bụ akụrụngwa iwu iji chọta ojiji diski na Linux na ọnụ sistemu Unix. Otu n'ime njirimara kachasị mma nke Duf bụ ike ya igosipụta nkọwa ojiji diski na ọmarịcha, nhazi enyi na enyi na ụdị taabụ. Ụfọdụ atụmatụ agbakwunyere nwere Duf gụnyere ojiji diski na mmepụta JSON.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye Duf na Debian 11 Bullseye.
Melite gi Nnenna 11 Bullseye Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Duf anaghị abata na ebe nchekwa Debian 11 na ndabara, yabụ ị ga-ebudata ya .deb ngwugwue si na oru ngo GitHub weputara peeji. Ozugbo ị nwetara njikọ kachasị ọhụrụ, mepee ọnụ ọnụ gị wee budata ngwugwu ahụ.
Na-esote, wụnye Duf Disk Usage Utility na iwu na-esonụ:
Ụzọ ntinye ọzọ maka ndị ọrụ Debian bụ ịwụnye Duf site na iji snaps. Usoro a anaghị amasị ọtụtụ ndị obodo Debian, mana ọ ka bara uru ịkpọ maka ndị na-eji snaps.
Nke mbụ, iji wụnye Duf Disk Utility na Snap, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịwụnye ma mụta gbasara ngwugwu Snap, lelee nkuzi anyị Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na Debian 11 Bullseye.
Ugbu a ị tinyela Duf Disk Utility, ị nwere ike ịmalite ngwa ahụ. Iji nweta ihe ngosi, jiri iwu na-esonụ n'ọnụ ọnụ gị:
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị ga-achọ igosipụta faịlụ sistemụ niile, gụnyere ndị bụ oyiri, pseudo na zoro ezo, na-eji iwu a:
Duf nwekwara ike nwee ike iwetulata na mezie nkọwa nke ihe ị ga-achọ ịhụ na ma ọ bụ jiri mkpụrụokwu lelee. Usoro ihe atụ syntax ga-abụ:
Ihe atụ nke iji mkpụrụokwu ga-abụ nhọrọ dị ka mountpoint, nha, na ojiji. Ị nwere ike iji ha atọ ọnụ ma ọ bụ n'otu n'otu. Ngwakọta ọ bụla ga-ekwe omume.
Ọmụmaatụ nke mountpoint, nha na ojiji:
Maka nhazi, ị nwere ike ịgbanwe agba site na ìhè na ọchịchịrị ha na ọzọ.
Mee ka isiokwu ọkụ rụọ ọrụ:
Mee ka isiokwu gbara ọchịchịrị rụọ ọrụ:
Iji nweta nchịkọta nhọrọ enyemaka ka ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara iwu ma ọ bụ chọta ozi ndị ọzọ n'ozuzu, jiri iwu na-esonụ.
Duf bụ mmemme dị mfe iji nyochaa uru diski. Ọ dị fechaa ma na-etolite mgbe niile na-elele GitHub na-eme ya. A na-ahazi ahụhụ ngwa ngwa na ọkacha mmasị n'etiti ọtụtụ ndị chọrọ mmemme ọkụ ịhụ ojiji diski, ọkachasị na gburugburu sava.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Utility iji diski Duf Mail igodo
Otu esi etinye PHP 8.0 na openSUSE 15 Leap
Otu esi etinye Nginx na Let's Encrypt TLS/SSL na Ubuntu 20.04